HomSuvedi — Tue, 12/03/2019 - 20:22
भयो दूर प्यारी नजाऊ नजाऊ
उही प्रेम सम्झेर फर्केर आऊ ।।
थियौं एक जस्ता कसो के भएर
छ दूरी बढेको तुरुन्तै हटाऊ ।।
सके फर्क बाचाहरु सम्झिएर
नफिर्ने भए हाल सम्मन् सुनाऊ ।।
भयो जिन्दगी भेलको पात मेरो
मलाई प्रिये लौ किनारा लगाऊ ।।
बसेकै छु यो प्रेमको दीप बाली
छ कस्तो त्यहाँ हाल केही बताऊ ।।
सबै भोक तिर्खा कहाँ पूर्ण होलान्
सके ‌ओठमा ओठ मात्रै छुवाऊ ।।
चिठी एक लेख्यौ त्यसैमा खुसी छु
बसेको छ खाटो सुकेको छ घाउ ।।
भाषामा विभक्तिहरु छुट्याई लेख्ने मित्रहरुका लागि आग्रह
HomSuvedi — Sun, 12/01/2019 - 20:10
जोडमा तोडमा भिड्छन् व्यर्थैमा जोडतोडले
के हुन्छ जोड्नमा लाभ के हुन्छ हानि तोडले ।।
जोडेर लेखिए एक नजोड्दा भिन्न अर्थ छ
पुर्खाको योग्यता जाँच्ने अबको तर्क व्यर्थ छ ।।
पुर्खाले जे दिए त्यो नै हाम्रा लागि छ वैभव
भ्रमको खेती गर्नेका नलागौं मित्र हो अब ।।
किमार्थ गल्ती देखिन्न जोडेर लेखियो भने
यद्यपि अर्थमा भेद देखिन्छ तोडियो भने ।।
जोड्दा अर्थ हुने भिन्न तोडमा भिन्न अर्थ छ
तोडमा नगरौं जोड अब त्यो तर्क व्यर्थ छ ।।
देखिएलान् कतै गल्ती पल्टाए इतिहासमा
मुखले छैन भन्दैमा जाडो हुन्न र माघमा ।।
कता के कसले जोड्यो त्यो छाडौं जे भयो भयो
Biju Subedi — Fri, 11/29/2019 - 23:05
सहनशील कहाँ जन्मेको उसलाई थाहा थिएन । उसको आमाबुबा को हो उसलाई थाहा थिएन । उसका आफन्तहरु को हुन् उसले अँझै भेट्न पाएको थिएन । ऊ हुक्र्यो बढ्यो आफ्नै वलबुताले । ऊ बच्चैबेला एकठाउँमा शरणमा परेको थियो आमाबाबाको माया पाउने आशामा र त्योभन्दा अगाडि नवजातको समयमा ऊ कुन अवस्थामा थियो उसलाई थाहा भएन, त्यसैले उसले बाबाआमा बताउन पर्यो भने उही आफू कमारा बनेर बसेको ठाउँका मालिकमालिक्नीहरुलाई देखाउँथ्यो र सम्झने कोसिस गथ्र्यो तर उसको मनमुटुमा कहिल्यै उनीहरुले मायाको स्नेह दिलाएनन् । उनीहरुलाई उनीहरुकै सन्तान अति प्यारो र ऊ भनेको सौतेनी नै हुनगयो ।
HomSuvedi — Fri, 11/29/2019 - 21:19
कुमारजी हार्दिक धन्यवाद ।
एक चिया बीसको नोट (कथा)
Biju Subedi — Fri, 11/29/2019 - 17:29
अस्तित्व जीवनदेखि निराश भयो । जीवन के हो खै उसले बुझ्नै सकेन । आपद पर्दा उसले धेरैलाई मद्दत गर्यो । दरेवानलाई त राजा बनायो । राजा बनाएकोले त के हेथ्र्यो उसलाई ! उल्टै उसले मरेको इण्डियनले जिउँदो नेपालीलाई खाएसरि गर्यो । विल्लीवाँठ हेर्दा उसलाई दया पलाउँथ्यो, सबलाई मनैले सहयोग गथ्र्यो, कहाँबाट कहाँ पुर्याउँथ्यो तर फगत कसैले गुणको गुणन गरेन ।
मेरी आमाको सिउँलो पु्छिएको देखें
HomSuvedi — Tue, 11/19/2019 - 20:10
वैरीलाई पर परै छेक्ने कोही छैन
नेपालीको मनको बह देख्ने कोही छैन ।।
ठान्दा होलान् वैरीलाई भगाइन्छ यस्तो
सत्रहजार आफ्नै दाजु भाइ मारे जस्तो ।।
कलाकारको गाउँदा गाउँदै गलो बसेको छ
मित्रताको नाममा आज ब्वाँसो पसेको छ ।।
मित्र देख्नु पर्ने ठाउमा शत्रु लेख्न थालें
धरापमा मेरो देश मैले देख्न थालें ।।
देश थाम्ने युवा उतै ताबेदारी गर्छन्
ओखतीको थोपो बिनै आमाबाबु मर्छन् ।।
सपना पनि रगतले मुछिएको देखें
नेपालको सिउँदो मैले पुछिएको देखें ।।
लिपुनिर बाउको शिर तछारेको देखें
आमालाई माझ सडकमा पछारेको देखें ।।
HomSuvedi — Tue, 11/19/2019 - 18:38
कुनै स्वार्थमा लिप्त छन् देशभित्र
जुठो चाट्न खोज्ने कसैको चरित्र
कुराले हियामा कसैको छुँदैन
विना एकता देशसेवा हुँदैन ।।
HomSuvedi — Wed, 11/13/2019 - 14:59
महाकाली दुखेको छ मेची दुखेको छ
किनकिन मेरो गलो आज सुकेको छ
राजै आज सुकेको छ ।।
लिपु मात्रै कहाँ हो र सुस्ता महेशपुरमा
मेरो देशको मुटु लुछ्न वैरी लुकेको छ
राजै वैरी लुकेको छ ।।
मित्र सम्झी मनको बह फोएँ मैले किन्तु
दिउसोमासै अर्ना राँगो हान्न फुकेको छ
राजै हान्न फुकेको छ ।।
स्वाभिमान र सार्वभौम गुमाएको देखी
मानौं मेरो सगरमाथा आज झुकेको छ
राजै आज झुकेको छ ।।
महाकाली दुखेको छ मेची दुखेको छ.......
पछि म मदन पुस्तकालय काठामाडौंमा हुँदा पनि उहाँसँग भेट भइरहेकै थियो । म झापा आएपछि र अलिकपछि ता सहकर्मीका रुपमा समेत यहाँ उहाँको सान्निध्यता रहन गयो ।
HomSuvedi — Sat, 11/09/2019 - 18:27
वनवासका अनुभूतिहरुः संक्षिप्त परिचय
'वनवासका अनुभूति' नामक कविता कृतिका साथ कवि दुष्यन्त भट्टराई पछिल्लो चरणका सशक्त कविका रुपमा उदाएका छन् । श्री बुद्धिप्रसाद घिमिरेको छैंटौं पुण्यतिथिको छेक पारेर गरिएको 'कोकप्रतिभा निकुञ्ज काव्यगोष्ठी' को अवसरमा आधुनिक महाकवि रमेश खकुरेलद्वारा इलाममा १९ गते कार्तिकमा विमोचित उक्त कृतिमा ६ दर्जन कविताहरु समेटिएका छन् । छन्दअभियन्ता डा देवी नेपालद्वारा भूमिका लेखिएको र कविका पिताबाट शुभाशीर्वादका रुपमा लेखिएको अग्रअंश पछि लेखकको केही कथनका साथ कविताको क्रम सुरु भएको छ ।
तीन भेँट (कथा)
Biju Subedi — Fri, 11/08/2019 - 14:10
“याद छ तिमीलाई ? तिमीलाई मैले झिलिमिली सानो चाँदीजस्तो रेसाले घेरिएको आकारमा तीनपटक भेटिसकेको थिएँ । त्यो तीनै भेट मेरा लागि ! अझ भनुँ यस पृथ्वीका लागि नै मथिङ्गल खल्बलिने सूचक हुनसक्थ्यो । तर यस दुनियाँका स्वार्थीहरुले गर्दा, अझ भनुँ आफन्त र झनै आफन्त भनाउँदाहरुको चक्लावन्दीमा परेर मैले तिमीहरुका लागि केही गर्न सकिनँ ।” निष्कर्षले यसरी बाहिरि ग्रहका जीवसँग कुरा गर्दै थियो ।
गरिबका डाक्टर, डा.सुमन कर्माचार्य
editor — Sat, 11/02/2019 - 19:25
मानिसहरू यो धर्तीमा एक एकओटा कामले आएका हुन्छन् । काम विनाका मानिस कोही हुँदैनन् । जन्मिदै प्राप्त भएका कसैका सीपले, कसैका ज्ञानले र कसैकसैका असीम प्रतिभा शक्तिका कारण जीवनमा मानिस आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै जाँदा संसारबाट जाने बेलामा आफूलाई अमरत्व बनाइसक्छ । संसारमा अमर व्यक्तित्वहरूको जीवनी बुझ्दा धेरथोर यो कुरा पत्तो पाइन्छ । उसो त संसारमा जति पनि मानिसहरूको आगमन हुन्छ तिनीहरूको आफ्नोआफ्नो ड्युटी हुन्छ । सो पूरा भएपछि मानिस महाप्रस्थानको यात्री बन्छ ।
HomSuvedi — Sat, 10/26/2019 - 21:12
बस्नेत सर यातायात क्षेत्रका निकै नामी हुन् । उनका पिताको निधन भएको हुँदा छिमेकका मित्रसमूहले सममवेदना व्यक्त गर्ने निधो गरे । समवेदना तयार गर्ने जिम्मा संस्थाकी अध्यक्ष सुलोचनालाई लगाइयो । अनि उनले पनि आफ्ना पतिलाई यो जिम्मा लगाइन् र भनिन्-
"हेर्दा अलिक आकर्षक हुनु पर्यो । भरसक चाँदी जस्तो टल्कने फ्रेम नै लाइदिनू । सबैकोभन्दा राम्रो र आकर्षक हुनुपर्यो । पैसाको चिन्ता नगर्नू । माथितिर कविशिरोमणिको त्यो छ नि कवित्त 'कालले टपक्क टिप्यो' भन्ने, हो त्यो हालिदिनू । राम्रो रङ्गीचङ्गी र सानदार फोटो हुनु पर्छ मृतकको । राम्रो फोटो छानेर अनि हेरेर हालिदिनू । सबै मिलाउनू र लिएर आउनू । लु बेहोरा लेखिदिनू त ।"
HomSuvedi — Wed, 10/23/2019 - 18:43
उज्यालो नबन्दै यहाँ नित्य आऊँ
र आई यहाँ एक गाना सुनाऊँ
नखाई अघाऊँ र खाई अघाऊँ
सुधा एक प्याला चियाको उघाऊँ ।।
अँध्यारै यता अन्तुमा सूर्य आई
चिसो याममा झन् चिसोले नुहाई
लुकी हेर्दछन् लोभिँदै नित्य घाम
सधैंकी तिमी अप्सरा हौ इलाम ।।
यहाँ ज्येष्ठको श्रेष्ठको मान हुन्छ
यहाँ नित्य सद् ज्ञानको गान हुन्छ
तिमीलाई देख्ता सधैं हे इलाम
मलाई भने स्वर्गकै हुन्छ भान ।।
जहाँ ईश आएर खोल्छन् कपाट
र मन्दाकिनी झर्दछिन् स्वर्गबाट
अँधेरै जहाँबाट झुल्कन्छ घाम
तिमी लाग्दछ्यौ स्वर्ग झैं हे इलाम ।।
कहाँ नित्य त्यो ईशको गान हुन्छ
कहाँ मृत्यु जित्ने सुधा पान हुन्छ
केही जर्खरिँदा (व्यङ्ग्य मुक्तक)
HomSuvedi — Sat, 10/19/2019 - 18:37
केही जर्खरिँदा सिलोक बटुली सञ्जालमा फाल्नु छ
अहिले वाचनको छ भव्य महिमा चाहिन्न सद् लेखन
अजिङ्गर र असफल राष्ट्र
'देश हाँसेन' भित्र हँसाउने उपायको खोजी
आफ्नै विश्वासमा बाँच्ने कवि
शब्द निश्शब्द कोलाज
छिनोको चोट नखाई
शीर्षक विनाको कविता
तिम्रा जस्तै आँसुहरू
तान चलाउनु चर्खा काट्नु
कहिले तिम्रो पछ्यौरीमा
नेपालको माटोको उर्वराशक्तिको एक परिचय तथा व्यवस्थापनमा विवेचना
प्रकृतिको रङ्ग (लघुकथा)